I-Semalt ichaza ukuba kutheni umntu kufuneka avimbe iBots kunye ne-Crawlers ye-Website
Kukhuselekile ukuthetha ukuba ezininzi iimbono eziza kwiwebhusayithi yakho zivela kwimithombo engekho yoluntu kunye neyodwa, kwaye akunjalo kuba kufuneka ulahlekise ukuba ufuna ukubona iwebhusayithi yakho ekhula ubomi bonke. Ukuba uvakalelwa kukuba i-bot bot ulungile kwaye inokwethenjelwa, wenza iphutha elikhulu njengoko kunokukhokelela i-Google ukukhubaza i-akhawunti yakho ye-AdSense. Ngokugqithiseleyo, i-bots ibonakala njengezithuthi zabantu kwi-Google Analytics, kodwa kwakungenjalo kwinyanga ezidlulileyo. Le mihla, ngaphezu kweesenti e-70 ekhulwini lezithuthi ezivela kwiiwebhusayithi ezincinci zivela kwi-bots kunye nemithombo yokukhohlisa. Ingcali ye-Max Bell, yeSemalt , ikuxwayisa ukuba i-bots ihlala izama ukuya kwindawo yakho kwiindlela ezininzi, kwaye akunakwenzeka ukuba ulahlekise - umzugsunternehmen verursacht schaden.
Inani elithile lebhobho eliya kutyelela amaziko akho alikho into engafanelekanga kwaye engenamsebenzi; nokuba ziyiluncedo kumaphepha akho ewebhu xa efika kwisixa esincinci. Ezinye zebhodi ezilungileyo, umzekelo, zisetyenziswe yi-Google ngokwayo ukufumana umxholo omtsha kwi-intanethi. Phantse yonke injini yokukhangela ukusebenzisa i-bots efanelekileyo ukuchonga umgangatho wamanqaku. Indlela abaye bayigqiba ngayo umgangatho utshintshile, ngoku baqhelisela ukusetyenziswa kweenkonzo ezinkulu zesofthiwe ze-software..Iimvula zi landela izixhumanisi, gxuma kwisayithi enye ukuya kwelinye, kwaye uqhotyoshelise umxholo omtsha kwaye utshintshile umxholo. I-Google bots ziyinkimbinkimbi, kunye neeseti ezinzulu zeemithetho ezingakwazi ukulawula ukuziphatha kwazo. Umzekelo, umyalelo we-NoFollow kwiikhonkco wenza ukuba asebenze ngaphantsi kwaye angabonakali kwi-Google bots.
Iingcambu ezimbi zizo zonakalisa indawo yakho kwaye ayikwazi ukunika naliphi na inzuzo. Bafuna uphando kwaye bafumana i-indexed ngokuzenzekelayo. Umxholo wakho uboniswa kubini kunye nebhodi, ukungawuthobeli umgangatho kunye nobuqiniso. Iibhokhwe ezimbi zingayithobeli imiyalelo yebhobhothi kwaye ungasebenzisi iibhloko ze-IP ukugcina umgangatho wamaphepha akho ewebhu. Enye yeengxaki ezinkulu kule mibhobho kukuba umxholo unzima ukutsalathisa kwaye uhlala ufihliwe kuluntu ngelixa uhlala uvulekile kubagxeki abangakwazi ukufikelela kwiifayile zakho ukuze uhlalutye inkqubo yakho. Kukho i-spam bots nazo ezingonakalisa ukusebenza kwendawo yakho. Bazalisa isayithi yakho ngemiyalezo echazwe ngaphambili, ukwenza ukuba abathengisi abachaphazelekayo bazive bebi.
Ngaba ufanele uvimbele amabhothi?
Ukuba uhlala ufumana iimbono ezivela kwi-bot bots, kungenzeka ukuba akufuneki ukuba kuvalwe. Kodwa ukuba ufumana izimvo ezivela kwi-bots ezimbi, unokucinga ukuba uzivimbele. Kufanele uvalise iGooglebot, ekhoyo ukuba isuse indawo yakho kwimiphumo ye-injini yokusesha. Ngakolunye uhlangothi, ngokuqinisekileyo kufuneka uvalise ama-spambots. Ukuba uyazi malunga nokukhuselwa kwesiza sakho kwiDDOSing, kuyimfuneko ukukhusela idilesi ze-IP ze-bots kunye ne-spammers. Njalo khumbula ukuba i-bots ezimbi zazingayi kubakhathalela ngeefayile zakho ze-robot.txt, ezibuhlungu gqitha kuba ukukhuselwa kwesi fayile kuyimfuneko yokukhula kwesiza sakho kunye nokusebenza kwayo yonke.